September 2021 – Cele News TV
လဆေိပျမှာ ရုတျတရကျဖမျးဆီးခံခဲ့ရပွီးနောကျပိုငျး ကွားသိရတဲ့ သရုပျဆောငျမြိုးသန်တာထှနျး(စိတျမကောငျးလိုကျတာ)
September 30, 2021 100million 0
ကွညျ့ရှု့သနျးခြီသှားတဲ့ ခကျခကျခဲခဲ အရာတှေ ကို အလှယျတကူ လုပျပွ သှားတဲ့ သငျဇာဝငျ့ကြျော.
အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျလေးကို ပိုငျဆိုငျ ထားပွီး မိနျးကလေး ခငျြးတောငျ ငေးမောအားကနြရေသူလေးကတော့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး သငျဇာဝငျ့ကြျောပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ ဆယျစုနှဈကြျောတိုငျအောငျ အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျမှုတှမြေားစှာ ရရှိပိုငျဆိုငျ ထားတဲ့ မငျးသမီးလေး တဈလကျ ဆိုရငျလညျး မမှားနိုငျပါဘူးနျော။ ခတျေရှပွေ့ေး ဖကျရှငျတှကေို လိုကျဖကျညီအောငျ ဝတျဆငျတတျပွီး […]
စကားလုံး လှလှလေးနဲ့ခငျ ပှနျးဖွဈသူကွှသှေား အောငျ ခြုပျလိုကျတဲ့ ရဲ နောငျရဲ့ခဈြဇနီးလေး
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် ရဲနောင်ကတော့ Myanmar Idol သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေ ဂီတလောကသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ချိုသာလွန်းတဲ့ အသံပိုင်ရှင်လေးဖြစ်တာကြောင့် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေ အထူးနှစ်ခြိုက်အားပေးနေကြတာပါနော်။ ရဲနောင်ကတော့ ချစ်ရတဲ့ ဇနီးချောလေးနဲ့အတူ ပျော်စရာကောင်းတဲ့အိမ်ထောင်ရေးဘဝလေးကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။သူ့ရဲ့ ဇနီးချောလေးကလည်း အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းပြီး အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်း ပီသလွန်းတာကြောင့် ရဲနောင်တစ်ယောက် ကြည်နူးနေရပါတယ်နော်။ […]
ဒေါ်လာငွေဈေးတက်လို့ NLD အစိုးရကို ဝေဖန်ခဲ့ဖူးတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဖိုးသောကြာ
ဒေါ်လာငွေဈေးတက်လို့ NLD အစိုးရကို ဝေဖန်ခဲ့ဖူးတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဖိုးသောကြာ The post ဒေါ်လာငွေဈေးတက်လို့ NLD အစိုးရကို ဝေဖန်ခဲ့ဖူးတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဖိုးသောကြာ appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
တူရကီရေခဲမုန့်ဆိုင်က အကနဲ့ သွက်လက်စွာကထားတဲ့ ဗွီဒီယိုအား ပရိတ်သတ်ကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့ အလှမယ် သင်းသင်း
တူရကီရေခဲမုန့်ဆိုင်က အကနဲ့ သွက်လက်စွာကထားတဲ့ ဗွီဒီယိုအား ပရိတ်သတ်ကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့ အလှမယ် သင်းသင်း ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အလှမယ်သင်းသင်းလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း သိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ။ သူမကတော့ မင်းသားဝေဠုကျော်နဲ့ ကတောက်ကဆ ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ‌တော့ ဝေဖန်မှုတစ်ချို့ကို ခံခဲ့ရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်ကာလတုန်းကလည်း သင်းသင်းဦးဆောင်တဲ့ ပရိဟိတအဖွဲ့တစ်ခုနဲ့လည်းအဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး သူမကိုယ်တိုင် စိတ်ညစ်မှုတွေနဲ့အတူ […]
ကြိုကျထီးရိုး စတေီ တျောမွတျ ကွီးမှာ ကောငျးမှု ကုသိုလျမြားစှာ ပွု လုပျရငျး (၇) ရကျ သားသမီး ပွညျသူမြား အတှကျဆုတောငျးခွငျးတှေ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ ရှပေိုးအိမျ
ရှပေိုးအိမျကတော့ အနုပညာနယျပယျထဲကို ဟိုးအရငျကတညျးက ဝငျရောကျလာခဲ့ပွီး ဇာတျကားပေါငျးမြားစှာမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့မငျးသမီးလေးဖွဈပါတယျ။သူမက တော့ ဇာတျကားမြားစှာမှာ ကရြာဇာတျရုပျကို ပီပွငျပိုငျနိုငျအောငျ သရုပျဆောငျပွီး ဇာတျရုပျအမြိုးမြိုးနဲ့ ကွညျ့ရှုသူ ပရိသတျတှကေို ဇာတျကားအဆုံးထိ မြောပါသှားအောငျ ဆှဲချေါသှားနိုငျတဲ့ Acting ကောငျးတဲ့ မငျးသမီးဖွဈပါတယျ။ ရှပေိုးအိမျ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ဇာတျကားတှကေိုဆိုရငျလညျး ပရိသတျတှကေ […]
အမှိုက်ပုံမှာစွန်ပစ်ထားခံရပြီး ကျန်းမရေးမကောင်းတဲ့ သားငယ်လေးကို ခေါ်ယူမွေးစားလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေ
အမှိုက်ပုံမှာစွန်ပစ်ထားခံရပြီး ကျန်းမရေးမကောင်းတဲ့ သားငယ်လေးကို ခေါ်ယူမွေးစားလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေ The post အမှိုက်ပုံမှာစွန်ပစ်ထားခံရပြီး ကျန်းမရေးမကောင်းတဲ့ သားငယ်လေးကို ခေါ်ယူမွေးစားလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေ appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတွေပေးတဲ့ အသက်အရွယ်ကို ရောက်ရှိနေပြီလို့ ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် သွန်းဆက်
စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတွေပေးတဲ့ အသက်အရွယ်ကို ရောက်ရှိနေပြီလို့ ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် သွန်းဆက် ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် လောကမှာ မသိသူမရှိတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေးသွန်းဆက် ကတော့ ကိုဗစ်ကာလမှာ အနုပညာခြေလှမ်းတွေ ကျဲသွားခဲ့ပေမယ့်လည်းပရိသတ်တွေက ချစ်ခင်အားပေးနေဆဲ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပါ။သူမရဲ့အလှပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ TIKTOK လေးတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် အမြဲမျှဝေပေးနေတဲ့ သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ […]
အမေရိကန်မှာပြသမယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ့် နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးကြီး မေ၀င်းမောင်
အမေရိကန်မှာပြသမယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ့် နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးကြီး မေဝင်းမောင် မင်းသမီးကြီးသရုပ်ဆောင်မေဝင်းမောင်ဟာနှစ်ပေါင်း၃၀အတွင်းသူမရဲ့အနုပညာတွေကိုမဖော်ထုတ်ဘဲနေလာခဲ့ပေမယ့်NBC၊Channelကတင်ဆက်တဲ့NewAmsterdamတီဗီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ၊ဟေမာတံခွန်၊ဆိုတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူမရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာအခုလိုပဲရေးသားထားပါတယ်။ အတွေအကြုံ၊အသစ်မဟုတ်သောအသစ်၊နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်လောက်အတွင်းမှာလုံးဝနီးပါးခေါက်ထားခဲ့ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအတွက်ပါဝင်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်၊တီးခေါက်ကြည့်တယ်၊ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်၊ကြိုးစားကြည့်တယ်၊လှုပ်ရှားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတစ်ယောက်တည်းတစ်စိမ်းစစ်စစ်မဟုတ် တဲ့တစ်စိမ်းတို့အလည်NewYorkကိုချီတက်လာခဲ့ပါတယ်။ လှုပ်ရှားဖြစ်တော့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်၊တစ်စိမ်းတွေရဲ့အလည်မှာလို့ဆိုရင်ရပေမယ့်တစ်ကယ်တော့ကိုယ်တစ်သက်လုံးရင်းနှီးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မို့စိမ်းတယ်လို့မခံစားရပဲစိတ်အေးချမ်းစွာသက်တောင့်သက်သာရှိခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်၊ဒီကTelevisionဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုမှာမြန်မာလူမျိုးသရုပ်ဆောင်အမျိုးသမီးလိုတယ်ဆိုလို့လျှောက်ကြည့်ရာကZoomနဲ့Auditionလုပ် ဖြစ်ခဲ့ပြီးအရွေးခံရပြီးNewYorkကိုသွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာLAကမြန်မာပြည်အတွက်ရံပုံငွေပွဲမှာပါဝင်ဖို့ရှိနေတဲ့အတွက်NewYorkကိုနှစ်ခေါက်သွားခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာလူမျိုးနောက်ထပ်နှစ်ယောက်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖြစ်ပြီးအတူတွဲပြီးသရုပ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်၊ဟေမာတံခွန်၊ဆိုတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးကြီးအဖြစ် NBC Channelက NewAmsterdam ဆိုတဲ့ TV၊Seriesမှာဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်၊GuestStar၊အနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။ NewAmsterdamကဆေးရုံတစ်ရုံကအဖြစ်အပျက်တွေကိုတင်ပြတဲ့Seriesဖြစ်ပါတယ်၊ဟေမာခေါ် MissTakhonကလူနာတစ်ဦးပေါ့၊တစ်ခြားမြန်မာသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးကဟေမာရဲ့မြေးမလေးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရပြီးနောက်တစ်ဦးကတော့မြန်မာသံရုံးကအမှုထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့သရုပ်ဆောင်ရပါတယ်။တွဲပြီးသရုပ်ဆောင်ရတဲ့အဓိကသရုပ်ဆောင် ဆရာဝန်Maxအဖြစ်သရုပ်ဆောင်သူကRyan Eggoldဖြစ်ပါတယ်။ Blacklistကိုကြည့်ဖူးရင်သူ့ကိုသိပါလိမ့်မယ်၊တိုတိုပြောရရင်တော့အစစ အဆင်ပြေပါတယ်၊နောက်မှရိုက်ကွင်းအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆိုရင်ရေးပါဦးမယ်Season4ရဲ့Episode5၊ThisBeTheVerse၊မှာ ပါဝင်ရတာပါ၊Season4ကအခုစနေပါပြီ၊Episode 5ကOctoberလထဲမှာလွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်၊Tuesday […]
သမီးလေးကို ကိုယျဝနျဆောငျစဉျက ရိုကျထားတဲ့ အမှတျတရပုံတှကေို ခပြွလာတဲ့ စညျဖွိုးတို့ ဇနီးမောငျနှံ
သမီးလေးကို ကိုယျဝနျဆောငျစဉျက ရိုကျထားတဲ့ အမှတျတရပုံတှကေို ခပြွလာတဲ့ စညျဖွိုးတို့ ဇနီးမောငျနှံ The post သမီးလေးကို ကိုယျဝနျဆောငျစဉျက ရိုကျထားတဲ့ အမှတျတရပုံတှကေို ခပြွလာတဲ့ စညျဖွိုးတို့ ဇနီးမောငျနှံ appeared first on Celebrity Corner. klcelenews